Transposh - Mitory amin'ny fiteny samihafa - Ny transposh.org Wordpress Plugin Showcase sy ny fanohanana toerana
Tratry ny taona 2015 – Inona no miandry?
Janoary 1, 2015 amin'ny tolotra 3 Comments
Te hanao writeup haingana momba Inona no tsy nomanina ho an'ny taona ho avy:
Backend kofehy mpamoaka lahatsoratra – endri-javatra ity dia mikasika ny 80% tanteraka amin'ny ankehitriny, izany dia mamela anao hahita tady nampidirina ho ny banky angona ka hanao fihetsika sasany amin'ireo. Zavatra izay tena mafy izao toy ny manala teny rehetra avy amin'ny iray ho tonga mpandika teny anatn'ny. Antenaina io tolotra io noho ny famoahana amin'ny herinandro vitsivitsy.
Fanohanana ny Widgets amin'ny Uploads lahatahiry – fanao filatro mpanoratra Efa mitaraina (ary tsy diso izany) momba ny hoe manery ny reinstall upgrading ny Widgets. Ny hevitra fototra dia ny mamela rakitra sasany mba hijanona ao ary tsy izany hassle. Mety ihany koa ny hanokatra ny safidy iray anaty filatron-dahatsoratra Misy video Directory izay mamela antsika mba hanome safidy bebe kokoa ny Widgets tsy inflating ny plugin File size.
Frontend kofehy mpamoaka lahatsoratra – izany no miteraka ny sasany interface tsara ny kofehy eo amin'ny pejy, fa raha tsy hoe “Fandrarian-dahatsoratra marevaka” dia hamela izay tsara lavitra workflow, indrindra mikasika ny fanontana amin'ny Meta tady sy ny hafa tady miafina, miaraka amin'ny vintana, ajax fandikan-teny ho ovaina koa rehefa afaka izany hanatsarana. Ity iray ity dia haka volana vitsivitsy ho avy.
Rafitra iombonana fanohanana – endri-javatra izany dia tonga dia mandika isa avy amin'ny Eoropeana rafitra iombonana amin'ny teny Arabo sy Hindi ny rafitra (ary koa ny lefitra-mifanohitra amin'izay). Endri-javatra tsy manan-danja fa ny endri-javatra tsara avy tsy ho ela ny parser akaiky anao.
WP Menu fidirana – tsy dia tia manao izany raha ny marina amin'ny, mety hitranga, mba tsy.
Izay mety ho fanehoan-kevitra sy ny hevitra ho raisina tsara eto ambany, raha dikany Ho manampy azy ireo isika, ny workplan. Raha tena maniry ny hampiroborobo ny endri-javatra mety manohana ara-bola ny Coding, mifandray amintsika amin'ny alalan'ny endrika.
Tratry ny taona!
Nametraka Under: General Messages
Version 0.9.6.0 – Lava indrindra overdue, navoaka tamin'ny andro fohy indrindra
Desambra 21, 2014 amin'ny tolotra Leave a Comment
Io dikan-manampy ny vaovao Google mandika fiteny folo no nanampy vao haingana. Ny fanafahana nifantoka tamin'ny ady ny fampitandremana sy ny Bibikely izay ho tafiditra tao amin'ireo Transposh tamin'ny taon-dasa.
Mety hanontany tena, raha ny rindrankajy Tsy miova, Ahoana no dia tonga Bibikely no nisisika tany? Ny valin'izany dia tsotra, ny rindrankajy tsy misy ao amin'ny banga, manova zavatra ny fotoana rehetra, PHP dikanteny vaovao koa fampitandremana hentitra izay voahelingelina mpampiasa sasany, nisy boky vaovao ho an'ny WordPress sy ny rindrambaiko singa, ary koa niova ho ny mahery indrindra Google handika maotera. Fiovana ireo toe-javatra namorona lalàna amin'izao fotoana izao dia tsy afaka hiatrehana, nefa tianay raha vaovao io dikan-dia ho bebe kokoa afaka manao.
Zavatra vaovao hafa dia ahitana Yoast SEO sitemaps fidirana (Mila Patch izany, torolalana ao amin'ny fehezan-dalàna).
Nisy endri-javatra kely mba hanesorana tsy misy ilàna azy Auto teny (izay mitovy ireo teny tany am-boalohany ny tady, izay mitranga rehefa misy toerana natao voasakan'ny Google)
zavatra bebe kokoa, ny readme.txt rakitra no namanao.
Manantena ny hahazo zavatra bebe kokoa ho amin'ny hafainganam-pandeha sy ny nikodiadia 🙂
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates
Version 0.9.5 – Hanatsarana ny very
Febroary 11, 2014 amin'ny tolotra 8 Comments
Version 0.9.5 navotsotra tsy ela loatra, ary ny feno dikan- 0.9.5.1 nisaorana tamin'ny naha-tsara. Mety manontany tena ianao hoe, No tadiaviko ny vaovao farany ao amin'ny WordPress Dashboard ary tsy mahita na inona na inona, ahoana no tonga?
Izany no tena antony 0.9.5 dia velona, nisy fitsikerana bibikely mifandray amin'ny fiovana natao tao amin'ny hanatsarana API amin'ny WordPress 3.8 izay nanao transposh hanakana vaovao rehetra (anisan'izany ny tenany) avy amin'ny Dashboard.
Izany, ny hatao?
Mba hanatsarana ny farany dikan-feno, misy safidy vitsivitsy:
mankarary ny amin'izao fotoana izao Transposh plugin, hijerena ny vaovao farany, vaovao ny dikan- 0.9.5 avy wordpress.org, mampihetsika ny plugin, marika “mamela ny fanavaozam-baovao ho an'ny feno dikan-” ary vaovao farany indray
hamafa ny amin'izao fotoana izao ny dikan-plugin sy mametraka ny dikan avy wordpress.org sy manaraka ny fomba vaovao
tanana télécharger Version farany sy ny antontan-taratasy fotsiny hisolo amin'ny lohamilina.
Feno fialantsiny marina tokoa isika ny amin'izany mety hanakana
Inona koa no vaovao?
More fiteny nanampy ho an'ny Google maotera, fanovàna ny isan'ny ho 82 nanohana fiteny!
Ahoana ny momba 0.9.4?
Tena tsara tarehy pirinty, raikitra olana amin'ny taratasy fanomezam-pahefana ny Google fanohanana, dia ho efa nanoratra lahatsoratra feno momba izany koa, izany 0.9.4, masìna ianao, ekeo ny fialan-tsiny 😉
Ankafizo ny vaovao dikan-, ary aza misalasala mampahafantatra antsika ny misy olana
Version 0.9.3 – Aiza ny sainam-pirenena nandeha?
Mey 10, 2013 amin'ny tolotra 40 Comments
Tsy nandeha lavitra, azafady jereo ity horonantsary ity na mamaky ny torolalana etsy ambany.
Inona no tokony hataonao mba hahazoana azy ireo?
Hanatsarana fotsiny ny dikan-mampiasa feno ny toromarika manaraka:
Hanatsarana ny farany Version avy wordpress.org (izay no ho farany, ery)
Check “mamela ny hanatsarana ny feno dikan-” ao amin'ny toe-javatra
Maso ny upgrades sy manatanteraka ny hanatsarana, izay ihany!
Inona ny vaovao ao amin'ny dikan- 0.9.3:
Fanavaozam-baovao dia miasa avy amin'ny toerana
Misy bibikely fixes
Fahafahana mba hanesorana ny rel = hafa izy izay tsy mahasoa foana
(0.9.3.1) Efa namoaka zana dikan-mampiditra ny fiteny vaovao tohanan'ny Google, tanteraka ny fanaovana ny fanisam – 73! (Raha misy eto miteny Hmong, dia mifandraisa aminay)
Manantena izahay fa hahazo izany ianao dikan-.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: feno pirinty, tsy ampy taona, fanafahana, Video, wordpress.org
Mey 1, 2013 amin'ny tolotra 44 Comments
Ela izay, izahay ny suckers… 🙁
Efa-taona rehefa mandeha any amin'ny WordPress repository, ary 189,795 download taty aoriana, Transposh dia mandao ny wordpress.org repository.
Toa, izany fotoana izany isika rehetra anaty filatron-dahatsoratra dia nanana ny toerana rohy, ary na dia azo atao mba hampiala azy, izany namely ny wordpress.org torolalana.
Izany dia tondrozotra fa tsy manaiky, dia mino fa mendrika antsika voninahitra ho an'ny asa. Tsy latsaky ny amin'ny twitter, Facebook, na hafa fantatra tsara orinasa manome antoko fahatelo Widgets avy any.
Isika ihany koa dia afaka tsy manaiky ny zava-misy fa ny plugin dia hesorina tsy misy taratasy, ary tsy misy na oviana na oviana fiovana, tsara avy tamin'ny manga.
Tsy afaka manaiky fa mametraka hafatra fa ny plugin dresaka dia hesorina ny Moderators fotsiny satria tsy tia azy ireo, na manapa-kevitra fa izy ireo manohitra lalàna fa efa nahary ny tenany. Fitsipika tsy te handinika indray.
Afaka izy na manao na inona na inona fanapahan-kevitra tiany, sady koa anie, ny ny fampiatranoana sy ny fitsipika. Tsy afaka ny tsy miraharaha izany, Soa ihany fa tsy ampy ny manaiky azy ireo manana.
Raha te-hitaraina, tsy hitaraina eto, ary hitaraina miezaka ny sehatra fiadian-kevitra, fa ny hiheveranao azy dia fa ho mpandrindra, wordpress.org Tsy demokrasia, sady tsy ny GPL compliant toerana, ny zava-drehetra dia tsy maintsy ho afaka, amin'ny vidin'ny, sy ny teny, izany no antony nahazo taonina ianao kilemaina Plugins izay afa-tsy ho fampiroboroboana ny mpanohana pirinty. Izany no soso-kevitra ihany koa ny zavatra izay ataontsika amin'ny Transposh. Ary tsy toy izany, tsy kely iray.
Raha misy manaraka dikan-dia mandrakizay ho nakarina izany toerana, dia ho kilemaina pirinty, (tsy misy rohy eto, azo antoka) fa tsy azo ampiasaina ny tena dikan-. Version farany (tsy mandringa) dia ho nanompo eto an- Download pejy. To izay dia izao tsy maintsy manampy ny rafitra vaovao.
Misalasala ny hiresaka momba izany ao amin'ny fanehoan-kevitra eto.
Ela wordpress.org, sy ny fisaorana ho an'ny rehetra ny trondro.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: wordpress.org